Vatambi veBritish Vanotamba Biografes Plus Untold Yevana Nhau
musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI
Vatambi veNyanzvi Vatambi vanobva kuEngland, Scotland, Wales uye Northern Ireland vese vane Nhau dzeUdiki uye Biography Chokwadi. LifeBogger inokwikwidza munzira yayo isingachinjiki yekukuudza idzi dzisingakanganwiki nguva dzinonakidza uye dzinobata.
Nei Vechidiki Nhoroondo uye Biography yeChirungu, Scottish, Welsh uye North Ireland Nhabvu
Kutanga uye pamberi pezvese, takaona kuti vanhu vazhinji vanoona UK nhabvu. Semuenzaniso, Wiki inoshuma kuti vanhu zviuru zvina nemazana mana emamiriyoni vanotarisa Premier League.
Fans, panguva uye mushure memutambo wega wega, pounder pane yakawanda kubvunza nezvevatambi vavanoyemura. Kubvunza mizhinji yemibvunzo nezve vatambi venguva vane nguva pamusoro, kugadzira pazivo rezvenziyo pasi rese rewebhu.
Kuvhara iyi geji, LifeBogger yasarudza kuisa mharidzo yekudzokorora nyaya dzeVechidiki Nhau dzeBiography Chokwadi dzeVanhabvu kubva kuUnited Kingdom.
Yedu yeUnited Kingdom Nhabvu Yenyika Yakatarisana
Imwe neimwe yezvinyorwa zvedu inotevera kurongeka zvine hungwaru uye inoputswa munzvimbo dzinotevera.
Kugumisa mifananidzo yehucheche uye kuisa pamwechete, izvo zvePakutanga Zvakaitika zvevatambi venhabvu vatambi vanobva kuUK.
Isu tinoputsa chokwadi pamusoro peNhoroondo Yemhuri, Mavambo uye Midzi yevatambi venhabvu venhabvu vanobva kuUK.
LifeBogger inokuudza iyo Yekutanga Upenyu zviitiko izvo zvakakonzera kuberekwa kwevechidiki mabasa eUK vafambi vebhola.
Chinyorwa chedu chinoenderera mberi kuunza izvo zvinoitika zveRubatsiro rwevechidiki kuzvikoro zvavo.
Iyo nzira inoenda Mukurumbira Nhau- Kupepeta iyo Turning Point iyo yakaita UK nhabvu vanonzwa kuti vangabudirira.
Iyo Rise to Fame Nhau- Isu tinoputsa Nhau Yebudiriro uye ikozvino Mukurumbira Status ye UK nhabvu vatambi.
Chikwata chakabuda pachena nezve "Rudo Rwehupenyu" revanyanzvi venhabvu vanobva kuUK. Zvichitaurwa zviri nyore, isu tinokuzivisa iwe shamwari dzeVasikana kana Madzimai.
Isu tinoenderera mberi kune izvo zvisingataurike chokwadi nezve vega Vamoyo veVanotenderera kubva kuUK.
Tinokuita kuti uzive nhengo dzemhuri yavo uye nehukama hwavanadzo nemumwe.
Chikwata chedu chinozivisa Michovha, Net yakakosha uye ndikuudze iwe UK vatambi venhabvu vanoshandisa mari yavo (Maitiro ehupenyu).
Chekupedzisira, tinokuunzira imwe Untold Chokwadi iwe yausina kumboziva kuti iripo nezveava vatambi venhabvu.
Parizvino, isu takaputsa iyo United Kingdom Chikamu mune inotevera Sub-Zvikamu.
England Nhabvu Vatambi
Mukupfupisa, Lifebogger anotenda mune zano rekupa kune vateveri ruzivo base sezvairi Nyaya dzeUdiki uye Biography Chokwadi yeBritish inyanzvi yeBhora.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu muchifambiso chedu chekusvitsa nyaya nezve vatambi venhabvu. Isu tinotenda hazvisi zvese zvekuona nhabvu kana nhabvu asi kuziva zvakawanda nezvevatambi vanopa kwazvo, zuva-mukati uye zuva-kunze pitch.
Chikwata chedu chevagadziri chinoshingairira kurongeka uye kurongeka munzira yakajairika yekuburitsa nyaya dzenhabvu. Ndapota Taura nesu kana iwe ukacherekedza chero chinhu chisina kunaka mune chero chipi zvacho zvinyorwa zvedu pane ino kategori.
Ikozvino pasina imwezve ado, ngatitange neyeUdiki Nhau uye Biography Chokwadi cheMabhora (vatambi venhabvu) vanobva kuUnited Kingdom.
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: June 15, 2020
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 26, 2020 0